Burmese taste - Iora: တန်ခူးလရဲ့ မုန့် အလှူ အုန်းနုို့ ကျောက်ကျောနဲ့ ထမင်းခြောက်ကြော် (ရယ်ဒီမိတ်)
Posted by Iora at 5:06 PM
Mon Petit Avatar April 18, 2011 at 6:45 PM
Delicious dessert, without doubt, I could skipameal and eat them with coffee!!!
Iora April 18, 2011 at 7:34 PM
Thanks for cheering. I am glad that you like them. I should have putabig cup of coffee for you. :D
ကောင်းမွန်ဝင်း April 18, 2011 at 8:35 PM
ဒီမှာတော့ ဒီရာသီက ပန်းကြည့်ပွဲလေ။
ငှက်ကြည့်သွားကြတာပါ။ ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာ ငှက်ကြည့်ဝါသနာရှင်တွေအရမ်းများပါတယ်။ သဘာဝတောတောင်တွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းပြီးဥယျာဉ်တွေတည်ထောင်တားပေးပြီးကားလမ်းတွေရောက်သလိုသန့် စင်ခန်းတွေလည်း ပစ္စည်းအပြည့်စီစဉ်ပေးထားတော့ ရာသီဥတုကောင်းတာနဲ့ အမျှ ငှက်ကြည့်သွားနေကြတဲ့သူတွေနေရာအနှံ့ တွေ့ နေရတာပါဘဲ။ ကျမတုို့ အဖွဲ့ က တလတခါသွားပါတယ်။
Nyi Linn Thit April 19, 2011 at 12:16 AM
ထမင်းခြောက်က တစ်ထုပ်ကို ၂ ဒေါ်လာပဲ ကျတယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ တွက်ချက်ပြီးမှ ပြောတာလို့ ဆိုလိုချင်လို့ ဂဏန်းပေါင်းစက်ပါ အနီးမှာ ချပြထားတာ ထင်တယ်..၊းD (ခင်ခင်မင်မင် နောက်တာနော်....)
ရွှေညာသားလေး April 19, 2011 at 2:44 AM
ကျောက်ကျော လာစားပါတယ်... နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ...
စိုင်းမင်း April 19, 2011 at 4:50 AM
အစ်မရေ ကျောက်ကျော လေးက စားချင်စရာ...
subuueain April 19, 2011 at 5:58 AM
ကျောက်ကျော အရမ်းကောင်းမဲ့ ပုံလေးဘဲ
ကျောက်ကျောလေး စားချင်စရာ :)
Iora April 19, 2011 at 7:48 AM
ကျောက်ကျောရောထမင်းခြောက်ရောစားသွားနော်။ ကုိုယ့် ကျောက်ကျောပုံတွေတင်တော့ ဘေဘီလည်း ကျောက်ကျောလုပ်ဘူးတာသတိရလို့ လာကြည့်လိုက်သေးတယ်။ လုပ်နည်းတော့သိပ်မတူဘူး။ ပုံကတော့ခပ်ဆင်ဆင်ဘဲနော်။
boke, April 19, 2011 at 2:37 PM
Iora April 19, 2011 at 6:10 PM
ကုိုယ်သုံးထားတာကတော့ တယ်လီဖုန်းတံဆိပ်အထုတ်သေး ၂ ထုတ်ကို အုန်းနုို့ ဘူး ၂ ဘူး နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ အညွှန်းတော့မကြည့်မိဘူး။ မကြည့်ဘူးဆိုတာထက် စာလုံးလေးတွေကသေးလို့ စိတ်မရှည်တာနဲ့ ဆက်မဖတ်တာပါ။ အညွှန်းအတုိုင်းမှန်းထဲ့ကြည့်ပေါ့နော်။ ကုိုယ်ကမျက်မှန်းနဲ့ ရေနဲနဲနဲ့ အရင်ရောမွှေပေးပါတယ်။ ရေမများသွားအောင်တော့သတိထားပါတယ်။ အုန်းနုို့ လည်းထဲ့မှာဆိုတော့ ကျိုချိန်ကြာပြီးလူပင်ပန်းမှာစိုးလို့ ပါ။ ကျောက်ကျောမှုန့် တွေအားလုံးသမသွားရင်တော့စကျိုပါတယ်။ ကျိုရင်းနဲ့ ဘဲသကြားကိုကုိုယ်ကြိုက်တဲ့အရသာရတဲ့ထိထဲ့ပါတယ်။ ဆက်တိုက်တော့မကပ်သွားအောင်မွှေပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အုန်းနို့ ဘူး ၂ဘူးဖေါက်ထဲ့ပါတယ်ကျုိုနေတဲ့အိုးထဲကို။ ဆားလေးပါးပါးအရသာလေးအောင်ထဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ နောက်မီးဖုိုတခုမှာ အိုးတခုထဲမှာရေများများဆူအောင်တည်ပြီးသာကူကုို ပြုတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီနှစ်အုိုးကို တပြိုင်တည်းဘဲတည်ရင်း ကျောက်ကျောကိုမွှေပေးပါတယ်။ ကျောက်ကျောကရေသိပ်များများမထဲ့ထားတော့ ခဏလေးနဲ့ ဆူပါတယ်။ ဆက်မွှေပေးပြီးပျစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပန်းကန်လေးထဲမှာ စမ်းထဲ့ပြီးခဏနေလို့ ခဲသွားတာတွေ့ ရင်အအေးခံမဲ့ဗန်းထဲကို လောင်းထဲ့လိုက်ပါတယ်။ ကျောက်ကျောရည် နဲနဲ ချန်ထားပြီးတော့ အဲဒီအရည်ထဲကုို ခုနကကျုို (ပြုတ်)ထားတဲ့ သာကူစေ့တွေကို ကော်ဖီစစ်နဲ့ ဆယ်ထဲ့လိုက်ပါတယ်။ သကြားလေးနဲနဲထပ်ထဲ့ပါတယ်။ နဲနဲပေါ့သွားလို့ ။ ပြီးတော့ အဲဒီသာကူပါတဲ့ကျောက်ကျောရည်တွေကို ခုနကကျောက်ကျောချ့ည့်ထဲ့ထားတဲ့ဗန်းထဲကို ညီညီမျှမျှရောက်အောင် ဗန်းထဲကို ဖြေးဖြေးချင်းလောင်းထဲ့လိုက်ပါတယ်။ သာကူကလေးပြီး ကျောက်ကျောရည်ကလည်းအရည်ပဲဖြစ်နေသေးတော့ အောက်ခြေကိုရောက်သွားမှာပါ။ မပူပါနဲ့ ။ ညီညီလေးထဲ့ပေးဘို့ ဘဲလိုတာပါ။ ၄၅ မိနစ် လောက်ဘဲကြာမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီမှာကအေးတော့ ခဲသွားပါတယ်။ လှီးတဲအခါကျတော့ သာကူတွေက အောက်ဘက်မှာ ပြင်လိုက်လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကျောက်ကျောခဲသွားမှအပေါ်ကတထပ်တင်ရင်လည်း ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကုိုယ်ကတော့ အချိန်မပေးချင်တော့ အဲဒီလိုဘဲလုပ်လိုက်ပါတယ်။ သာကူကိုတခါထဲကျောက်ကျောရည်ထဲထဲ့ပြီး လောင်းထဲ့အအေးခံရင်လည်းရနုိုင်မယ်တင်ပါတယ်။ နောက်တခါ အဲဒီလိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ ရေနွေးတအိုးလည်းအဆင်သင့်တည်တားပါတယ်။ ကုိုယ်အဆင်သင့်မဖြစ်ခင်ပျစ်သွားရင် ရေနွေးရောနုိုင်အောင်လို့ ပါ။ ခုလောက်ဆုို သိပ်အကူအညီမဖြစ်ပေမဲ့ သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ အုန်းနို့ ဘူးတချို့ ကမကောင်းပါဘူး။ ကျမအထင် ဆန်မှုန့် တွေရောထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အုန်းနုို့ ဘူးကောင်းတာရွေးသုံးဘို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှကုိုယ်တို့ မြန်မာတွေကြိုက်တဲ့ အုန်းနုို့ ကျောက်ကျောမျိုးရမှာပါ။
မရှင်းရင်လည်းထပ်မေးနုိုင်ပါတယ်။ အားမနာပါနဲ့ နော်။ နောက်ဆုိုရင်တော့သတိလေးထားပြီးအချိုးအဆတွေမှတ်ကြည့်ဘို့ ကြိုးစားပါမယ်။
bote April 23, 2011 at 2:59 AM
မေးပြီး အလုပ်များလွန်းနေလို့ ခုမှလာကြည့်ရတာပါ...
Myanmar Online Music November 22, 2011 at 11:30 PM
၀ုတ်တယ်ဗျို. ၀ုတ်တယ်။အုန်.နို.ဘူးတချို.မကောင်းဘူးဆိုတာ သိပ်သိပ်ဟုတ်။
ယိုးဒယားကလာတဲ. အုန်.နို.ဘူးတိုင်းမကောင်းဘူး။ အိမ်ကယောင်္ကျားကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်ရင် သူက အုန်းနို.ဘူးဖြစ်ပြီးရောဝယ်လာရော။ ကောင်းတဲ.တံဆိပ်ကိုသေချာပြပြီးမှာမှ ရတယ်။
Iora August 14, 2013 at 5:54 PM
ဟုတ်တယ်။ အုန်းနုို့ မကောင်းတဲ့ဘူးဆုို ကျောက်ကျောနဲ့ ကိုအနံ့ အရသာမတူဘူးနော်။